Vaovao - JinJiang Footwear & Sports Industry Expo
Amin'ny 19 Aprily 2021, handrehitra indray ny indostrian'ny kiraro iraisam-pirenena Shina (Jinjiang) faha-23 sy ny Expo Indostrian'ny Fanatanjahantena Iraisam-pirenena fahaenina any amin'ny Tanànan'i Jinjiang, Faritanin'i Fujian, izay fantatra amin'ny anarana hoe "Renivohitra Shoes Shina".
Manan-karena taorian'ny 20 taona mahery, fitambarana fampirantiana faritra mihoatra ny 710000 metatra toradroa, ny mpandray anjara fampirantiana matihanina mpihaino manerana izao tontolo izao mihoatra ny 70 firenena sy ny faritra ary koa ny an-jatony tanàna an-trano, ny exhibitors manerana izao tontolo izao, fampirantiana sokajy dia feno, eo an-toerana fanompoana eo amin'ny toerana, ny hetsika ilaina dia manan-karena sy maro loko, dia nankalazaina ho iray amin'ireo "China top ten charm exhibition".
Tamin'ny Oktobra 2017, Jinjiang dia nahazo ny zo hampiantrano ny lalao eran-tany faha-18, ka lasa tanàna faharoa taorian'ny Shanghai nampiantrano ny lalao. Ny fihazonana ny lalao eran-tany 2020 dia hampiroborobo tanteraka ny fanovana sy ny fanavaozana ary ny fampandrosoana mitsambikina ny indostrian'ny fanatanjahantena ao Jinjiang, mitondra mpianatra 85 tapitrisa sinoa amin'ny sekoly ambaratonga faharoa handray anjara amin'ny fanatanjahantena amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, mampiroborobo ny laza sy ny fampandrosoana ny afovoany. fanatanjahan-tena an-tsekoly eto amin'izao tontolo izao, ary koa mitondra fitakiana tsena lehibe sy fahafahana fampandrosoana ho an'ny indostria. Amin'ny fankalazana ny faha-20 taonan'ny fampirantiana, ny komity mpikarakara dia hanao ezaka hanatsarana ny tanjona amin'ny fampiasam-bola sy ny fifandraisana, hanangona loharanon-karena ara-panatanjahantena avo lenta kokoa, ary hanao ny ezaka rehetra mba hamoronana sehatra mety tsara ho an'ny mpiara-miasa amin'ny indostria. hanehoana ny tanjany, hisambotra ny fahafaha-manao fandraharahana, hanamafisana ny fiaraha-miasa ary hikatsahana fampandrosoana iombonana.
Tsara kokoa isika, hoavy tsara kokoa. Ny indostrian'ny kiraro iraisam-pirenena Shina (Jinjiang) faha-23 sy ny Expo Indostrian'ny Fanatanjahantena Iraisam-pirenena fahaenina dia hanome anao hetsika ara-panatanjahantena mahafinaritra, miavaka ary mazoto!
Adiresy: Tu an Industry Park, Neikeng Town, Jinjiang, Fujian China
Karazana fako inona no atao hoe kiraro fako...
Impiry no tokony hosasana ny kapa a...
Inona ny fitaovana EVA?
Fanaraha-maso roa ny fanjifana angovo – Zava-misy...